ကာရန်မဲ့ အတွေးစများ: ရန်ကုန်ပြန် မှတ်တမ်း (၃)
မတွေ့တာကြာလို့ လှည့်လာတာ လက်စသတ်တော့ ရန်ကုန်ပြန်နေတာကိုး။ ရန်ကုန်ရဲ့ ကောင်းတာလေးတွေလဲ ပြောဦးမှပေါ့ အမရဲ့။ ဆိုးကွက်တွေချည်းပဲ။
September 6, 2007 3:27 AM
ဟီဟီ...ကိုရဲမွန်ပြောလည်းပြောစရာပဲ။ ကျွန်မ ရန်ကုန်ပြန်သွားတာ သဘောကျတာဆိုလို့ ဘာတခုမှ မတွေ့ခဲ့ဘူး။ ကောင်းတာလေးတွေ ရေးချင်ပေမဲ့ ကျွန်မကပဲ အဆိုးမြင်နေလို့လားမသိဘူး ဘာကောင်းတာမှ ပြောစရာမရှိဘူးဖြစ်နေတယ်။:D အဲဒီတော့ ကျွန်မရေးထားတာ ရန်ကုန်ရဲ့ ဆိုးကွက်တွေကြီးပဲ ဆိုရင်လည်း သည်းခံပြီး ဖတ်ကြပါ။ ကိုယ်ကြုံတာ၊ မြင်တာ၊ ခံစားရတာတွေပဲ ရေးထားတာပါ။ အပိုတွေ ပြောထားတာ တခုမှ မပါပါဘူးလို့...
ရန်ကုန်အ၀င် ရွှေတိဂုံဘုရားကို သင်္ဘောပေါ်ကနေ ခုလို ဖူးမြော်ရတယ်
ရန်ကုန်ပြန်ရောက်တဲ့ ပထမဆုံးရက်ပဲ မတွေ့ရတာကြာပြီဖြစ်တဲ့ လူတွေနဲ့ပြန်ဆုံရလို့ နည်းနည်းပျော်သလို ခံစားရတယ်။ နောက်ရက်တွေတော့ ကိုယ့်အိမ်မှာတောင် ကိုယ်နေရတာမပျော်ဘူး။ စထဲက အိမ်ထမင်း၊ အိမ်ဟင်းစားပြီး မိသားစု စုံစုံညီညီနဲ့နေနေရလို့လား မပြောတတ် ရန်ကုန်ပြန်ရောက်လို့ သူများတွေလို မိသားစုနဲ့တွေ့ရတယ်ဆိုတဲ့ feel လည်းမခံစားရ၊ အမေက ချက်ကျွေးတဲ့ ထမင်း၊ ဟင်းကို စားရလို့ အရမ်းစားကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ feel လည်းမခံစားရ။ အရာရာ ဟောင်းမြင်းနေတဲ့ထဲ ကျွန်မတို့ အိမ်လည်း အပါအ၀င်။ လူသိပ်မနေတော့တဲ့ ကိုယ်တသက်လုံးနေခဲ့တဲ့ ကိုယ့်အိမ်ကိုယ် ကြည့်ရတာ ပိုဟောင်းနွမ်းသွားပြီး တခြားအိမ်တလုံးလိုမျိုး မြင်နေရတဲ့ feel ကြီးနဲ့။ နေရ၊ ထိုင်ရတာ တော်တော်ကို စိတ်မသက်မသာဖြစ်ရတယ်။
ပိုက်ဆံတွေကို ရေပြီးတော့ လက်ညှိုးနဲ့လက်မမှာ မည်းပြီးကျန်ခဲ့တာကို ကြည့်ရင်း မြန်မာနိုင်ငံက ပိုက်ဆံလေးတွေ ဘယ်လိုကြောင့် နွမ်းဖတ်နေလည်း မသိဘူးလို့တွေးဖြစ်တယ်။ စက္ကူနဲ့လုပ်တဲ့ ပိုက်ဆံအရွက်တွေကိုတောင် အချိန်မီ အသစ်မလဲနိုင်လောက်အောင် သစ်တွေ၊ ၀ါးတွေပေါများတဲ့ နိုင်ငံမှာ စက္ကူတွေက ရှားပါးနေပြီလား မပြောတတ်ပါဘူး။ ၂၀၀၊ ၁၀၀ နဲ့ ၅၀တန် ပိုက်ဆံအရွက်လေးတွေက ထောင်တန်အရွက်လေးတွေထက် ပိုသနားစရာကောင်းလောက်အောင် စုတ်နွမ်းပြီး ညစ်ပတ်နေတာကို အများဆုံး တွေ့ရတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံက မထွက်လာခင် သုံးခဲ့ရတဲ့ ၁၀ တန်၊ ၂၀ တန်တွေက အသုံးမ၀င်တော့တဲ့ ငွေစက္ကူသာသာလောက်ပဲ ရှိတော့တာကိုလည်း မယုံနိုင်အောင်ဖြစ်ရသေးတယ်။ ရန်ကုန်ရောက်ချိန် ပထမဆုံးရက်မှာ ပိုက်ဆွံလွှဲထားတာ မရောက်သေးတာနဲ့ ယောင်းမဆီက ၃၅၀၀ လောက် ခဏယူပြီး အရင်က အမြဲစီးနေကျ သရေစိမ်းဖိနပ်လေးကို သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ သွားဝယ်ရင်း စားချင်တဲ့ မုန့်တွေလည်း စားခဲ့မယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ကူးနဲ့ ထွက်ခဲ့တယ်။ စတိုးဆိုင်ကို ရောက်တော့ ဖိနပ်က ၃၇၀၀တဲ့။ လူလည်း ပါးစပ်အဟောင်းသားဖြစ်ရတယ်။ ကျွန်မ မြန်မာမှာရှိနေစဉ် ၀ယ်နေကျဈေးက ၇၀၀ ကျပ်ပါ။ ဈေးတက်ရင်တောင် အဲလောက်တက်မယ် မထင်ထားခဲ့။ ၅ နှစ်အတွင်းမှာ လိုက်မမီနိုင်အောင် ပြောင်းလဲသွားတာ ကုန်ဈေးနှုန်းပါလားလို့တော့ တွေးလိုက်မိတယ်။ ကျွန်မ မသိတော့တဲ့ တခြားတံဆိပ်နဲ့ ဖိနပ်တွေလည်း ရှိပေမဲ့ စီးနေကျ ငွေငန်းမင်းတံဆိပ် လေးညှင်းရောင်ကိုပဲ အစွဲအလန်းကြီးကြီးနဲ့ ၀ယ်လာလိုက်တယ်။ အိမ်ပြန်ရောက်တော့ ပိုက်ဆံ ၂၀၀ စိုက်ပေးတဲ့ သူငယ်ချင်းကို ပြန်ပေးတာ မယူတဲ့အပြင် ၂၀၀ လေးကိုများ စကားထဲ ထည့်ပြောနေရသေးတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ တယောက်မျက်နှာ တယောက်ကြည့်ပြီး ရယ်နေကြတဲ့ ကျွန်မသူငယ်ချင်းတွေကို ကြည့်ရင်း ဒုတိယမ္ပိ ပါးစပ်ဟောင်းလောင်းဖြစ်ရပြန်တယ်။ အော် ပိုက်ဆံ ၂၀၀ က ဘာမှ မယ်မယ်ရရ ၀ယ်မရဘဲ လမ်းဘေးက ဖုန်း တခါ ဆက်စာပဲ ရှိတော့တယ်ဆိုတာ ကျွန်မမှ မသိသေးဘဲလေ။ ဘာပဲပြောပြော အဲဒီ(ရောက်ရောက်ချင်း)နေ့ကတော့ သရေဖိနပ်တရံကို ၃၇၀၀ ပေးရတယ်ဆိုပြီး ကျွန်မကတော့ ပြောလို့မဆုံးနိုင်ခဲ့။
သင်္ဘောပေါ်မှ ရန်ကုန်အ၀င် မြင်ကွင်း
မြန်မာပြန်ရောက်တုန်း ဧရာဝတီတိုင်းဘက်ကို ကားနဲ့ အလည် သွားဖြစ်တယ်။ အဲဒီဘက်မှာက မြို့တိုင်းလိုလိုမှာ အမျိုးတွေရှိတယ်လေ။ ကားက လူ ၈ ယောက်စီးရတဲ့ တက္ကစီကားလေးတွေကို စီးသွားရတာ။ လမ်းခရီးမှာ ကားပေါ်ကလူတွေ ပြောကြတဲ့စကားကို နားထောင်ရင်း မမြင်ရတာကြာပြီဖြစ်တဲ့ လယ်ကွင်းတွေ၊ တဲပုတ်လေးတွေ၊ မြင်းလှည်းတွေကို ကြည့်ရင်းနဲ့ပေါ့။ ပြောသာပြောတယ်။ အဲဒီဘက်မှာ မြင်းလှည်းတွေက ရှားပါးပစ္စည်းတွေပဲ။ များသောအားဖြင့် ဆိုင်ကယ်နဲ့ ဆိုက်ကားတွေပဲ တွေ့ရတယ်။
တချို့လယ်ကွင်းတွေက ရေမြုပ်နေတယ်။ ကားပေါ်ပါလာတဲ့ အဲဒီဒေသခံ ဦးလေးကြီးနဲ့ အဒေါ်ကြီးတွေက မေးသမျှ ရှင်းပြပေးကြတယ်။ အရင် အဲဒီဒေသက မိုးစပါးအရမ်းအောင်တဲ့ လယ်တွေဖြစ်တဲ့အကြောင်း၊ နောက်တော့ နှစ်သီးစားဆိုပြီး လုပ်လိုက်တာ လယ်တွေ ပျက်ကုန်ကြောင်းတွေ ပြောပြတယ်။ ကျွန်မ သိပ်နားမလည်တဲ့ကြားက နားလည်သလောက်ပြောရရင် နှစ်သီးစားဆိုတာ မိုးရော၊ နွေရောမှာ စပါးတွေစိုက်တာပေါ့။ နွေမှာကျတော့ လယ်ထဲ ရေသွင်းပြီး စိုက်ကြတာတဲ့။ အဲဒီလိုလည်း လုပ်လိုက်ရော၊ မိုးရာသီရောက်တဲ့အခါ လယ်ထဲက ရေတွေကပြန်မထွက်၊ မိုးကလည်းရွာနဲ့ လယ်တွေက ရေလျှံပြီး စပါးစိုက်မရဖြစ်သွားတာ။ နွေရာသီကျမှ စိုက်လို့ရတော့တယ်တဲ့။ ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားတာပေါ့။ တချို့လယ်တွေကတော့ လုံးဝပျက်သွားတယ်တဲ့။ နောက် သူတို့အချင်းချင်း ပြောနေကြတဲ့ လယ်ယာနဲ့ ပတ်သက်တာတွေ ကျွန်မလည်း သိပ်တော့နားမလည်ဘူး။ အဲဒီတုန်းက ပထမဆုံးလုပ်ရတဲ့ လယ်သမားတွေ တော်တော်ဒုက္ခရောက်သွားတယ်လို့ ပြောတယ်။ အကြွေးပတ်လည်ဝိုင်းပြီး လယ်တွေ ထိုးဆပ်ရတယ်တဲ့။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေလည်း တော်တော် ထိသွားတယ်လို့ပြောတယ်။ သူတို့က နှစ်သီးစားစိုက်ဖို့ အဲဒီမြို့နား ပတ်ဝန်းကျင်က စပါးဆိုရင် ကြိတ်ပြီး ဆန်ဖြစ်အောင် လုပ်ရမယ်ဆိုတာလောက်ပဲ သိတဲ့ ဆန်စက်၊ ဆီစက်ပိုင်ရှင်နဲ့ သူဌေးတွေကို ဦးစီးလုပ်ခိုင်းတာတဲ့။
ကားလမ်းဘေး လယ်ကွင်းတွေမှာရှိတဲ့ တဲလေးတွေက လူတွေခမျာ လယ်ကွင်းတွေ ရေမြုပ်နေလို့ လှေလေးတွေနဲ့ သွားလာနေကြတာကို မြင်ရတာလည်း တမျိုးလေးပဲ။ ကားပေါ်မှာပါလာတဲ့ ရန်ကုန်သားဦးလေးကြီးက ခုလို မှတ်ချက် ပြုတယ်။ "ဩော်...ဒီလိုမျိုးဘ၀တွေလည်း ရှိသေးတယ်။ သူတို့ဟာနဲ့ သူတို့တော့ ပျော်နေကြတာပဲနော်"တဲ့။ နောက် လယ်သမားတွေနဲ့ လယ်ယာတွေအကြောင်း ပြောပြီးတော့ ခုတလောဖြစ်နေတဲ့ ရုန်းစုရုန်းစုအကြောင်းနဲ့ ကုန်ဈေးနှုန်းတွေအကြောင်း ပြောကြပြန်ရော။ လက်ရှိ တာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ အကြောင်းကို ကားမောင်းတဲ့ ဦးလေးကြီးက ဆက်ပြောတယ်။ "သမီးတို့ရယ် ပြည်သူတွေ၊ ပြည်သားတွေအတွက် သူတို့ ဘာတွေများ အကျိုးရှိအောင် လုပ်ပေးဖူးလို့လဲ"တဲ့။ "သူတို့ဘက်ကနေ လိုက်ကူပြောပေးတဲ့ တချို့လူတွေ ရှိတယ်"တဲ့။ "အဲလိုလူမျိုးတွေနဲ့တွေ့ရင် အဘက တခွန်းပဲ ပြန်မေးလိုက်တယ်... ၇ရက်သားသမီးတွေကို စိတ်ချမ်းသာစေတဲ့ ကောင်းကွက်လေး၊ လုပ်ဆောင်ချက်လေး တစ်ခုလောက်ပဲ ပြောပြပေးပါလားလို့။ အဲဒီလိုပြောလိုက်ရင် ဟိုဘက်က ပါးစပ်ပိတ်သွားရော"တဲ့။ "ဟုတ်တယ်လေ... သူတို့ကြောင့် ပြည်သူတွေ စိတ်ချမ်းသာ၊ ကိုယ်ချမ်းသာဖြစ်ရတဲ့ကိစ္စ ဘာများရှိလို့လဲ"တဲ့။ ဒါက ပြည်သူစစ်စစ် တက္ကစီမောင်းတဲ့ အဘကြီးရဲ့ တကယ့်ရင်ထဲက စကားပါပဲ။ ကျွန်မတို့လည်း အဘကြီးစကား နားထောင်ရင်း ငြိမ်ကျသွားမိတယ်။
ကိုယ်သွားလိုရာရောက်တော့ ပဲ့ထောင်လေးနဲ့ဘုရားပတ်ဖူးရင်း ဘေးမြင်ကွင်းအချို့ကို ဓာတ်ပုံရိုက်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ကားနဲ့လာတုန်းကတော့ ကားလမ်းတွေက ကြမ်းတာကြောင့် လူတောင် အနိုင်နိုင် ထိုင်စီးနေရတာနဲ့ မရိုက်ဖြစ်ခဲ့ဘူး။ အပြန်မှာတော့ ကားနဲ့ မပြန်ဘဲ သင်္ဘောစီးလို့ ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။
ရေးပြီးချိန်: 9/06/2007 10:49:00 PM
Ah Ma yay,
Myanmar lo yay chin pay mat myanmar font type ma ya lo... Burglish nat yay lite tal naww....
Ah ma sar hte mhar....ayin ka 700 tan slipper ko... now 3700 pay ya dal so pee... ta ant ta aww nat yay htar lo par.... Ah ma nay dar Singapoer so... Myanmar nat lae` thate ma way par buu byar.. bar lo de kwar ha chat tay ko am thi dar lae` hin??... Ah ma home ko ta khar mah money ma po buu woo larr?? Exchange rate tay yaw... ta khar mha ma kyi mi buu woo larr... de lauk kyiasat pyat nay bo ma kg par buu byar... Koe tine pyay ko... ko chit tal so yin dot... myat chay ma pyat aung... kyi nay thint dal lo htin par dal byar...
မောင်လေး a2m2003... အမ မိသားစုနဲ့ ဒီနိုင်ငံမှာ နေနေပါတယ်။ မြန်မာပြည်က ဘယ်သူ့ဆီကိုမှ ပိုက်ဆံပို့စရာမလိုပါ။ မြန်မာပြည်ကို ၅ နှစ်ကျော် တခါမှ မပြန်ဘဲ ပြန်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက် အရာရာ အထူးအဆန်းဖြစ်နေတာတော့ အမှန်ပါပဲ။ မယုံဘူးဆိုရင်တော့ ၅နှစ်ကျော်ကြာမှ မြန်မာပြည်ပြန်ကြည့်ဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်နဲ့ အဆက်အသွယ်ပြတ်တယ်လို့ တခါမှ မပြောမိဘူးထင်ပါတယ်။ အွန်လိုင်းမှာ မြန်မာပြည်က သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အမြဲလို အဆက်အသွယ်ရှိပါတယ်။ ၇၀၀ ကို ၃၇၀၀ ပြောင်းလဲသွားတာ မပြောနဲ့။ ၂၀ တန်ကိုတောင် အသုံးဝင်နေသေးတယ် ထင်တဲ့သူပါ။ စင်္ကာပူသည် မြန်မာပြည်နဲ့ မဝေးဘူးဆိုပေမဲ့ စင်္ကာပူသည် မြန်မာပြည်မဟုတ်တာတော့ ဘယ်သူမှ ငြင်းနိုင်မယ် မထင်ပါဘူး။ မြန်မာပြည်နဲ့ အနီးဆုံး ထိုင်းမှာနေတဲ့ မြန်မာတွေကို မေးကြည့်ပါလား။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နေ့စဉ်အခြေအနေကို သိလားလို့... ဟုတ်ပြီနော်...
မပြောချင်ပါဘူး.. အားလွုးကိုဖတ်ပီးသွားတယ် တခုလေးတော့ ပြောချင်လာတာနဲ့ ဒီစာကို ရေးခြင်းပါ.
မကြိုက်ဘူးဆိုလဲ နားလည်ပေးမှာပါ။ ကော်မန့်တွေမှာပြောသွားသလိုပဲ ဘယ်သူမှ အတင်းလာဖတ်ခိုင်းတာမဟုတ်ပေမဲ့ အေ၇းအသားကကောင်းတယ် ဆွဲဆောင်မူရှိလို့ ဖတ်မိသွားတာ ၀န်ခံပါတယ်။
မြန်မာပြည်မှာမွေး မြန်မာရေမှာကြီးပီး သူများနိုင်ငံက အစားအစာ တွေကိုပဲ စွဲမက်နေတာတော့ မဖြစ်သင့်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ် မြန်မာမြေဟာ သူများနိုင်ငံတွေနဲ့ ယှဉ်ရင် စုတ်ပြတ်နေတာလဲ အမှန်ပါပဲ။ အစားအသောက်တွေ မကောင်းဘူး ပြောတာတော့ လွန်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ကျနော်ကိုယ်တိုင် မြန်မာပြည်က အစားအသောက်တွေ နဲ့ စားသောက်ဆိုင်တွေ ကို ၁ပတ်မှာ ၄ ရက်စားနေကျလူဆိုတော့ အဲလိုပြောတာကို မခံချင်လို့ပါ။
စကာင်္ပူဆိုတာ သေးသေးလေးပါ။ တခြားနိုင်ငံတွေကို ရောက်သွားတဲ့ အခါ စ ကို ဒီလိုမျိုးပဲ ပြောမယ်ဆိုတာ ယုံကြည်ပါတယ်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မြန်မာပြည် မတိုးတက်သေးတာ မှန်ပါတယ်။ အဲလောက်လည်း မဆိုးပါဘူး။ ဒီလိုရေး လို့ ရုရှားကလို့ မထင်ပါနဲ့။ လုံးဝ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျနော့်မိသားစုတွေ က ယခုတိုင်ရန်ကုန်မှာပဲ ရှိပါသေးတယ်။ နာဂစ်ကြောင့် အိမ်အမိုးလန် စလောင်းလန် နေပေမဲ့ အဆင်ပြေပါတယ်။ သေချာတာက စားသောက်တဲ့ ဆိုင် အရွေးမှားနေတာ ဖြစ်မှာပါ။
အင်း... ကိုmaung... နားလည်မှုတွေကတော့ လွဲနေပြီ ထင်ပါတယ်။ စလုံးက အစားအစာတွေကို ကောင်းတယ်လို့ ကျွန်မ တခါမှ မပြောဖူးပါဘူး။ စားသောက်ဆိုင်တွေကို မဆိုလိုပါဘူး။ ရိုးရိုး Hawkerဆိုင်တွေက အစားအစာတွေကို ပြောတာပါ။ စလုံးက အစားအစာက အရမ်းညံ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်မတို့အတွက်ကတော့ သိပ်မသိသာပါဘူး။ အိမ်ထမင်း အိမ်ဟင်းပဲ စားလို့ ဘယ်နိုင်ငံရောက်ရောက် စားလို့ကောင်းနေမှာ သေချာပါတယ်။
ရန်ကုန်က အစားအစာတွေ မကောင်းဘူးဆိုတာ တကယ်လည်း မကောင်းတော့တာပါပဲ။ နိုင်ငံခြားမှာ အနေကြာပြီး ထမင်း၊ ဟင်း ကောင်းကောင်း မစားရတဲ့သူတွေအတွက်တော့ လက်ရှိ ရန်ကုန်က အစားအစာတွေက အရမ်းကောင်းနေမှာ မထူးဆန်းပါဘူး။ ရန်ကုန်က စားသောက်ဆိုင်တိုင်း၊ အစားအစာတိုင်းကိုတော့ မကောင်းဘူးလို့ မပြောပါဘူး။ အရင်က ဘယ်နေရာ၊ ဘယ်ဆိုင်မှာပဲ စားစား၊ စားလို့ ကောင်းနေတဲ့ မုန့်ပဲသရေစာ၊ အစားအစာတွေက အခုတော့ လုံးလုံး အရသာမရှိတော့တာကို ဆိုလိုပါတယ်။ ကုန်ဈေးနှုန်းကကြီး၊ အစစအရာရာ ရှားပါးလာတဲ့အခါ ပါလေဟန်လေးတွေနဲ့ ဖြစ်သလို ချက်ပြုတ်ရောင်းချတာကို ဆိုလိုချင်ပါတယ်။ ဥပမာ- ပဲပြုတ်နဲ့ နံပြားဆိုရင် အရင်တုန်းက ဆီချက်နဲ့ ဆီရွှဲရွှဲထည့်ပြီး ရောင်းချပေမဲ့ ခုဆို ဆီတောင် မပါတော့ဘူး။ မုန့်ဟင်းခါးရည်ဆိုလည်း အချိုမှုန့်ကိုသာ အဓိကထည့်ပြီး အားပြုရောင်းနေရတယ်။ ငါးဆိုတာ ပါလေဟန်သက်သက်သာ ရှိတော့တယ်။ ဒီလို အစားအစာတွေက ဘယ်မှာ လာပြီး စားလို့ ကောင်းနိုင်ပါတော့မလဲ။ ဒီလောက်နဲ့ပဲ ကျွန်မ ဥပမာ ပေးတာ လုံလောက်မယ် ထင်ပါရဲ့။
ကျွန်မ ဒီလို (ဆင်ကောင်ကြီးတခုလုံး) ရေးပြ၊ ပြောပြ၊ ရှင်းပြလို့မှ နားမလည်နိုင်သေးဘူးဆိုရင်တော့ ဟုတ်ကဲ့... ကျွန်မလည်း မပြောတတ်တော့ဘူးရှင့်။ ကြိုက်သလို ယူဆနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်မသည် ဘ၀မေ့သူ၊ ဘ၀င်မြင့်သူ၊ တိုင်းပြည်သေးသေးလေးမှာ နေနေပြီး ကြီးကျယ်နေသူ... စသဖြင့်ပေါ့... ;))
somehow i can not write in burmese so i will write in english.
someone else is using my name and posting comments here, i don't know why they would do that. it's still anonymous on line anyway.
i am in agreement with you ma soe, that's the bottom line. i love burma, the food, the environment and the people in it. i left burma back in 1983 and living in the US since then. but i have gone back and visited the country since 1990 and almost every year since then. i love eating burmese food, but i had to restrain myself from eating food from the street vendors, especially wat thar dote toe ( yummy), due to uncleanliness. however i am able to eat from street vendors in bkk or s'pore without any problem. that' the different. our neighboring countries are so developed and our country is so undeveloped that it's depressing!
as i had mentioned in my past comments, i enjoy reading your blog because you areaclever writer. so if you, all ofasudden, start seeing my comments with such different angle then i had been writing, be cautious and check their ip address. perhaps it's an impostor.